पेरिसमा अश्लील घोटाला: कलाकार पाभ्नेस्कीले समान पार्टीलाई रोके - xnxx - TELES RELAY
पेरिसमा अश्लील घोटाला: कलाकार पाभलेन्स्कीले समान पार्टीलाई रोके - xnxx
क्यानाडाको तेल बालुवा योजना को लागी crumbles ...
इमानुएल म्याक्रोनद्वारा क्यामरून-वक्तव्य: आधिकारिक प्रतिक्रिया…
राय | रिपब्लिकन नागरिकताले पुनः चुनाव जित्न सक्छ ...
फ्रान्समा एउटा घोटाला - पेरिसका मेयरहरूका लागि उम्मेद्वार, म्याक्रोनको घनिष्ठ सहयोगी, भिडियो पाटेर्नास्कीले प्रकाशित गरेको भिडियो पछि चुनावबाट हटे। यस तेजस्वी कलाकार अधिकारीहरु देखि भाग्न रूस भागे। फ्रान्सेलीले उनलाई शरण दिएका छन्, एक अज्ञात कलाकार हो भनेर विश्वास गरी र पहिले नै पछुताए। पावलेन्स्कीले बान्क डे फ्रान्सको ढोकामा आगो लगाए र निलम्बित सजाय पाए। उनले किन फ्रान्सेली राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने निर्णय गरे? यी छविहरू हुन् जसले त्यस्तो प्रतिक्रिया लाई उक्सायो?
फ्रान्सको समाजमा नैतिकताको शुद्धताका लागि लड्ने राजनैतिक कार्यकर्ताको रूपमा एक अप्रत्याशित भूमिका खेल्दै पेरिसमा विर्सिएका एक असफल कलाकार-कार्यवाहक पीटर पावलेन्स्कीलाई फेरि एकपल्ट याद आयो। अनलाइन, उनले राजधानीका मेयर पदका लागि एक उम्मेदवारको निजी पत्राचारका स्क्रीनशटहरू पोस्ट गरेका छन्, तीनजनाका बुबा म्याक्रोनको सबैभन्दा नजिकको सहयोगी बेन्जामिन ग्रिभोट, जसमध्ये कान्छी कान्छी अझै एक बर्ष पुरानो छैन। स्पष्ट शब्दहरू र स्पष्ट भिडियोहरू, आफैले लिईएको, एक निश्चित युवतीलाई लक्षित थियो। आफ्नो फेसबुक पेजमा, पाभ्नेस्कीले यस्तो लेखेका थिए:
“उहाँ एक मात्र उम्मेद्वार हुनुहुन्छ जसको सम्पूर्ण अभियान परिवार, बचपन र परम्परागत पारिवारिक मूल्यको संरक्षणमा आधारित छ। एक जवान केटीसँग पत्राचारमा उनी भन्छन् कि परिवार र बच्चाहरू जेलमा छन्। यो विरोधाभास कसरी बुझ्ने? वा त्यहाँ कुनै विरोधाभास छैन, र ग्रिभोट केवल "पेरिस" भनिने सेल ब्लकका निर्देशक हुन चाहन्छन्? "।
रिव्निया पत्राचार गरेको स्वीकार गर्न बाध्य भए। उनले एक वर्षमा माटो हालेको र मार्ने धम्की दिएको तथ्यको कुरा गरे तर उनले छिटै टाढा जाने निर्णय गरे।
“एक बर्षमा मेरो परिवार र म अपमान, झूट, बेनामी हमला, व्यक्तिगत पत्राचार र धम्कीको सिकार भइरहेको छ। अब उसले सबै सीमानाहरू पार गर्यो। वेबसाइटहरू र सामाजिक पृष्ठहरूले मेरो व्यक्तिगत जीवनमा घोर आक्रमण गरेका छन्। मैले पेरिसको मेयरको लागि उम्मेदवारी फिर्ता लिने निर्णय गरें। "
नगरपालिका चुनावमा धेरै चासो राख्ने पाभ्लोस कहाँबाट आउँदछन् र यसको कति खर्च हुन सक्छ भन्ने प्रश्नले सम्पूर्ण फ्रान्सेली प्रेसलाई प्रश्न गर्दछ। ऊ आफैंले त्यस्ता खुलासेहरू प्रकाशित गर्दैन, किनकि यहाँ हामी सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग, र राजनीतिज्ञलाई पदबाट हटाउने बनाउने सबै कुराको बारेमा कुरा गरिरहेका छैनौं - र त्यो गोपनीयता को गोपनीयता मा कानून अन्तर्गत पर्दछ।
साइट, जहाँ प्रकाशन छ, संयुक्त राज्यमा दर्ता गरिएको छ र रिव्नियाका वकिलहरू र रूसी कार्यकर्ताहरूका अनुसार। तर रूसमा पाभलेन्स्कीलाई शing्का गर्नु पर्याप्त भन्दा बढी हुने थियो, उनका सबै विद्वानहरूले र अझै पनि आपराधिक मुद्दा खोल्दै। फ्रान्सले २०१ 2017 मा यसलाई आश्रय दियो, जस पछि यसले विश्व क्रान्तिको लागि आह्वान गरिएको बान्के डी फ्रान्सको ढोकामा आगो लगाइयो। उनीमाथि मुद्दा चलाइएको थियो, परिचारिकासँग झगडा गरिएको थियो, एक वर्ष जेल र एक वर्षको प्रोबेशन प्राप्त भयो। पाभलेन्स्कीले पढाउने कोशिस गर्दै थिए - यो स्क्यान्डलमा समाप्त भयो। अब ऊ प्रदर्शन गर्न कोशिस गर्दै छ, तर यो स्पष्ट छैन।
फ्रान्समा, प्रतिस्पर्धीहरूलाई दौडबाट हटाएर व्यक्तिगत जीवनलाई उजागर गर्दै, अझै पनी स्वीकार्य छैन। अपवाद बाहेक, सायद, आईएमएफका पूर्व प्रमुख डोमिनिक स्ट्रस-काह मान्न सकिँदैन, जो उत्पीडनको आरोप लगाइएको छ। सामान्यतया प्रेस भ्रष्टाचारका विभिन्न योजनाहरूमा परिणत हुन्छ, त्यसैले राजनीतिक समुदायको प्रतिक्रिया हो कि रिव्नियासँगको घोटाला पार्टी जस्तोसुकै भए पनि अत्यन्त एकीकृत छ।
“सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, म आफ्नो व्यक्तिगत समर्थन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सहमति बिना केहि भिडियोहरूको प्रसार हाम्रो देशको फौजदारी संहिताको अधीनमा छ र दुई वर्ष सम्मको हिरासत सजायद्वारा दण्डनीय छ। अवश्य पनि, अपराधीहरुलाई सजाय दिनै पर्छ "- फ्रान्सको आन्तरिक मामिला मन्त्री क्रिस्टोफ कास्टनेरले घोषणा गर्‍यो।
"मलाई लाग्छ कि न्याय प्रणालीले ती जिम्मेवारहरुलाई पहिचान गर्नु पर्दछ। व्यक्तिले गरेको कार्य प्रोफाइल गहिरो हुनु पर्छ। फ्रान्समा शरण प्राप्त गर्ने यस रूसीले आफूलाई यस्तो अवैध चालका लागि अनुमति दिन्छ। हामीले देख्नै पर्छ कि श्रीले रिव्नियाको ठाउँमा "," - नेसनल एसेम्ब्लीका डेप्युटी एफआरस राम्रोसँग भनिए, पार्टी "नेशनल युनियन" समुद्री ले पेनका नेता।
प्रतिक्रिया र म्याक्रोन गर्न बाध्य गरियो। उसले मेरो उम्मेद्वारसँग कुरा गर्‍यो र भन्यो कि उनले आफ्नो यात्राको निर्णयलाई कदर गरे।
मनपर्ने सूचीमा, रिव्निया केवल तेस्रो स्थानमा थिए, तर यो बुमरै sc घोटाला भयो र सम्पूर्ण म्याक्रोन पार्टी। हालका महिनाहरूमा संसदको तल्लो सदनमा १ 15 जना सदस्यहरू रिहा भइसकेका छन्। यद्यपि त्यहाँ अझै बहुमत छ, नगरपालिकाको चुनावमा, सर्वेक्षणले एकदम कम स्कोरको भविष्यवाणी गर्दछ।
यो लेख पहिलो पल्ट देखा पर्यो http://www.kxan36news.com/pornographic-scandal-in-paris-artist-pavlensky-prevented-the-same-party-rules
एप्पल ईन्साइडरले आईफोन १२ कार्यक्षमतामा नयाँ प्रकाश दिन्छ
क्यानाडाको तेल बालुवा योजना कारणका लागि गिरे ...
इमानुएल म्याक्रोनद्वारा क्यामरून-वक्तव्य: सरकारको आधिकारिक प्रतिक्रिया
राय | रिपब्लिकन बदमाशले ट्रम्पको पुनः चुनाव जित्नेछ -
"एक विशाल भाइरल महामारीको लागि नुस्खा": इरान एक रूपमा देखा पर्दैछ ...